အရိုးစုတွေ ကို နည်းပညာသုံးပြီး ပုံဖော်ထားတဲ့ ရှေးခေတ်က လူသားတွေရဲ့ ပုံစံများ - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingအရိုးစုတွေ ကို နည်းပညာသုံးပြီး ပုံဖော်ထားတဲ့ ရှေးခေတ်က လူသားတွေရဲ့ ပုံစံများ
September 17, 2021 Yan Amazing, Knowledge 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခေါက်မှာ ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ ရှေးခေတ်က လူသားတွေရဲ့ တစ်ကယ့် မျက်နှာ အစစ်အမှန် ပုံစံ တွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလို ပုံဖော်တဲ့ အခါ မှာလည်း ရှေးဟောင်း လူသားတွေရဲ့ အရိုးစုကို forensic facial reconstruction လို့ခေါ်တဲ့ နည်းပညာ သုံးပြီး မျက်နှာကို ပုံဖော်ပေးထားတာပပါ ။ ဒါ့ကြောင့် ရှေးဟောင်း လူသားတွေရဲ့ ပုံစံက ဘယ်လို မျိုးလဲဆိုတာ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ ကျောက်ခေတ်သစ် အတွင်းက အမျိုးသား
အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ကျောက်ခေတ် သစ် အတွင်း နေထိုင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား တစ်ယောက်ရဲ့ ပုံစံ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီ အမျိုးသားရဲ့ အရိုးစုဟာ နှစ်ပေါင်း ( ၅၅၀၀ ) သက်တမ်းခန့်ရှိပြီး ဂရိတ် ဗြိတိန်ထဲမှာ မြုပ်နှံထားတာကို ရှာတွေ့ခဲ့ကြတာပါ ။ သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေအရ ထို အမျိုးသားဟာ နာမည်ကျော် စတုန်းဟင့်ချ် ကျောက်တုံးကြီးတွေ မပေါ်ခင် နှစ်ပေါင်း ( ၅၀၀ ) အလိုလောက် ကတည်း က မွေးဖွားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အသက်ကတော့ ( ၂၅ ) နှစ် ကနေ ( ၄၀ ) ကြား ရှိနိုင်တယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ခန့်မှန်းထားပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၂ ။ ကြေးခေတ်က အမျိုးသမီး
နောက်ထပ် ပြောပြပေးမှာကတော့ ကြေးခေတ် တုန်းက ရှိခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူမ ကို Ava လို့ နာမည်ပေးထားပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ( ၃၇၀၀ ) ခန့် က မြုပ်နှံခံရတာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပညာရှင်တွေ က ခန့်မှန်းထားပါတယ် ။ Ava ရဲ့ အရိုးစု ကိုတော့ စကော့တလန် နိုင်ငံထဲက ကျောက်တုံးနဲ့ ထွင်းထားတဲ့ ဂူ တစ်ခုထဲမှာ ရှာတွေ့ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုမြင်တွေ့ရတာကတော့ စကော့တလန်ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင် Maya Hoole နဲ့ မှုခင်းအနုပညာရှင် Hew Morrison တို့ နှစ်ယောက် ပေါင်းပြီး ဖန်တီးထားတဲ့ သူမ ရဲ့ မျက်နှာပုံစံ ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ အီဂျစ် ဘုရင် တူတန်ခမန်
အခု ဖော်ပြပေးမှာကတော့ ရှေးဟောင်း အီဂျစ် ဖာရို ဘုရင် တစ်ပါး ဖြစ်တဲ့ တူတန် ခမန် အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ တူတန်ခမန် ဟာဆိုရင် ( 1332–1323 BC ) အထိ အီဂျစ် နိုင်ငံ ကို အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းမှာ အရေးပါတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက် အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ် ။ သူ ဟာ ထီးနန်းကို ဆက်ခံရချိန်မှာ အသက် ( ၁၀ ) နှစ် သာ ရှိသေးပြီး အသက် ( ၂၀ ) အရွယ်မှာတော့ နတ်ရွာစံ ခဲ့ပါတယ် ။ ( ၂၀၀၅ ) ခုနှစ် မှာတော့ တူတန်ခမန် ရဲ့ မံမီကို ကွန်ပျူတာ ဓာတ်မှန်ရိုက်ပြီး မျက်နှာပုံစံကို ဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ ရှေးဟောင်း ဂရိ မိန်းကလေး
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ရှေးဟောင်း ဂရိခေတ်တုန်းက ရှိခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ပုံစံ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ထို မိန်းကလေးဟာ ဂရိနိုင်ငံထဲက အေသင် မြို့မှာ နေထိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အသက် ( ၁၁ ) နှစ် အရွယ်မှာ မြုပ်နှံခံရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူမ ကို မြုပ်နှံခဲ့တဲ့ အချိန်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄၃၀ ဘီစီ လောက် က ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ပြောကြားထားပါတယ် ။ သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေ အရတော့ ထိုကာလ အချိန်တုန်းက ဆိုရင် ဂရိနိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဟာ အထွန်းတောက်ဆုံး ကာလကို ရောက်ရှိနေပြီလို့ သိရပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၅ ။ ဂျူးလီးယက် ဆီဆာ
နယ်သာလန် နိုင်ငံ မှာရှိတဲ့ ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ် အမျိုးသား ပြတိုက်က ပညာရှင်တွေဟာ တစ်ချိန်က ထင်ရှားခဲ့တဲ့ ရောမ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဂျူးလီးယက် ဆီဆာ ရဲ့ မျက်နှာ ကို ပုံဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီလိုမျိုး ပုံဖော်နိုင်ဖို့ အတွက် သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ ပြတိုက်ထဲက သိမ်းထားတဲ့ ဂျူးလီးယက် ဆီဆာ စကျင်ကျောက် ပုံတူ ရုပ်တုကို scan ဖတ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဂျူးလီးယက် ဆီဆာကို ( ဘီစီ ၁၀၀ ) ဇူလိုင် လ မှာ မွေးဖွားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး လုပ်ကြံခံရတာကတော့ ( ဘီစီ ၄၄ ) ရောမ မြို့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၆ ။ အလယ်ခေတ်က အမျိုးသား
အခု နောက်ဆုံး ပြောပြပေးမှာကတော့ အလယ်ခေတ်တုန်းက ရှိခဲ့တဲ့ အမျိုးသား တစ်ယောက်ရဲ့ ပုံစံ ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ထို အမျိူးသားဟာ အလယ်ခေတ် တုန်းက စကော့တလန် မှာ နေထိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အသက် ကတော့ ( ၁၃ ) နှစ် နဲ့ ( ၁၇ ) နှစ် ကြား ရှိတယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ခန့်မှန်းထားကြပါတယ် ။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ ထို အမျိုးသား ရဲ့ မျက်နှာကြွက်သား တွေ နဲ့ တစ်သျူးတွေကို မှုခင်း ဆေးပညာပုံစံကို အသုံးပြုပြီး ပြန်လည် ပုံဖော်ခဲ့တာပါ ။ ဒီ့နောက်မှာတော့ မျက်နှာ တစ်ခုလုံးရဲ့ အသွင်အပြင် ကို ဖန်တီးဖို့ အတွက် ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ် တစ်ခုကိုလည်း အသုံးပြုခဲ့ကြပါသေးတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အခုဖော်ပြပေးထားတာကတော့ အရိုးစု တွေကို နည်းပညာ နဲ့ ပြန်လည် ပုံဖော်တဲ့ အချိန်မှာတော့ ထွက်ရှိလာတဲ့ ရှေးဟောင်း လူသားတွေရဲ့ ပုံစံ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
ခေတ်ရှေ့ပြေးပြီး တီထွင်ထားတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း Gadgets လေးများ